Sida ay IS cadaw uga samaysanayso Afghanistan | Gaaloos.com
Home » isis » Sida ay IS cadaw uga samaysanayso Afghanistan
Sida ay IS cadaw uga samaysanayso Afghanistan
Waxay u badantahay in aad maqashay sida kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamku ay ugu sii fidayso dalka Afghanistan.
Malayshiyada ayaa sheegtay in ay khaliifo ka samaynayso buuraha bariga dalka Afghanistan, balse waxay sameeyeen khaladaad dhanka xeeladda ah sida uu sheegayo weriyaha laanta Afghanistan la hadasha ee BBC Sayed Cabdullah Nizami.
Waxaan ka soo jeedaa Kunar oo ka mid ah goballada ay ku xoog badan yihiin kooxda Dawladda Islaamka.
Waxaan dhigtay iskuul halkaas ku yaala saaxiibaday badankood waxa ay ku biireen dagaalyahanada jihaad doonka ah, qaarna waxay ku biireen kooxda dawladda Islaamka.
Waxaan filayaa in dad badan oo akhrinaya maqaalkan ay la yaabayaan ama ay cabsi gelineyso arrintaasi.
Laakiin ku biiridda kooxaha jihaaddoonka ah waa wax caadi ka ah halkan, dhab ahaanti waaba qeyb ka mid ah xirfadaha.
Ma jirto shaqa badan, marka dhalinyaradu waxa ay raadiyaan waxyaaba kale oo ay qabtaan, kooxaha jihaad doonka ahna waxay haystaan lacag iyo hub.
Waan nasiib badnaa, Qoyskeygu taajir maaha laakiin waxaan maareeyay in aan helo shaqo warbaahineed taasna waxa ay ii suuragelineysaa in aan arko kooxahaasi sidii ay u ku abuurmeen kuna xoogaysteen.
Majiro qof Afghanistani ah oo la yaabaya in gobalka Kunar ay aheyd meelihii ugu horeeyay ee kooxda dawladda Islaamka ay ka soo ifbaxday.
Gobalka ayaa marwalba waxaa lagu dhaliili jiray in ay adag tahay in la xakameeyo.
Waxaa Kuna ka jira qabiilo badan oo kala duwan, laakiin waxay u muuqataa in kuligood ay iska indha tirayaan xukuumadda Kabul, cid kasta ha hogaamisee.
Amerikaanka iyo weliba Taliban ayaa soo loodin waayay gobolka.
Waxaan ku faannaa dhaqanka dagaalyahannimada.
Aabahay waxa uu ahaa mujaahid lasoo dagaallamay Soviet-kii Afghanistan, Sharaf ayayna ii tahay in aabahay uu u dagaallamay dalkiiisa.
Waxyaabaha ku dhiirageliyay arrintan waxaa ka mid ah diinta, waxa uuna necbanaa in shisheeye aan diin laheyn ay la wareegeen dalka.
Kaligii ma ahayn, oo madax badan oo hadda Afghanistan ka Talisa ayaa ka mid ahaa mujaahidiintii xilligaasi.
Laakiin dhaqanka diinta ee gobalka Kunar ayaa xoogaa ka duwan dalka intiisa kale.
Dadka reer Afghanistan badankood waxa ay taabacsanyihiin mad-habka Xanafi, laakiin badankanagu waxaan ku barbaarnay kan Wahaabiyada oo ah mid afkaartiisu adagtahay, dadkana ku booriya inay u noolaadaan sidii Muslimiintii hore.
Aasaasaha wahaabiyadda Afghanistan waa Sheikh Jamil, wuxuuna ka soo jeeda magaalada Kunar.
Waxa uu ka helay lacag badan Sacuudiga si looga dhiso madarasooyin, waxaana qaar ka mid ah lacagtaasi uu ku taageeri jiray kooxaha kacdoonka wada.
Guud ahaan gobolkani oo dhan ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa gobol cusub oo khilaafadu leedahay oo lagu magacaabo Khorasan, waana magac taariikhi ah oo u taagan dhul ay ka mid yihiin Afqaanistaan, Pakistan iyo Iiraan.
Waxa uu sheegay in qorshahani uu ahaa in aysan ismuujin oo ay si tartiib ah ay ku xoogeystaan isla markaana ku kasbadaan kalsoonida dadka deegaanka.
Idaacad FM ah ayaa halkaasi laga hirgiliyay si ay borobagaandha ugu faafiso gobolka.
Basle intaas kaddib waxaa billowday khaladaad dhanka xeeladda ah.
Dhibaatada ugu weyn ayaa ahayd in taliyeyaashu ay maamuli waayeen ciidammadooda. Bishii July ee sanadkii hore, waxa ay dagaal la galeen Taalibaanka deegaanka iyo mid ka mid ah hoggaamiyeyaashooda sarsare.
Kaddib taliye kale ayaa waxa uu billaabay weerar ka dhan ah xoogagga dowladda ee gobolka deriska la ah.
Musiibo ayay ku noqotay arrintaasi Dawladda Islaamka, waana ku faraxsanahay in aan sidaa iraahdo.
Halkii ay ku xididdeysan lahaayeen halkaasi si qarsoodi ah waxa ay billaabeen in ay bannaanka isa soo dhigaan, haatanna dhinac kastaa ayaa laga soo weerarayaa.
Mareykanka ayaa bartilmaameed rasmi ah ka dhigtay kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamka eek u sugan gudaha dalka Afqaanistaan, wuxuuna halkaasi ka fuliyay hawlgallo taxane ah oo ay fulinayeen ciidamo khaas ah iyo sidoo kale duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha la hayn usbuucyadii ugu dambeeyay. Wuxuu weerar uga imaanayaa ciidamada dolwadda Afqaanistaan iyo Taalibaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka deegaanka, waxa ayna u muuqataa in cid kastaa ay iyaga ka soo hor jeedaan.
Tan ugu weyn ayaa ah in ay lumiyeen taageerada dadka deegaanka sababtuna waxa ay tahay waxa ay si naxariis darro ah u jir dilayeen isla markaana u dilayeen dadka aan waxbo galabsan ee ku nool tuulooyinka.
Dadka aan ogahay ee ku lug yeeshay kooxda Dawladda Islaamka isugu yeerta ayaa hadda is qarinaya oo dhaq dhaqaaqooda yareynaya. Intooda badan waa dagaalyahanno ka tirsanaan jiray Taalibaan balse waxa aad ugu adag in ay kooxdoodii ku laabtaan.
Daacish ayaa hadda aad daciif u ah marka loo eego sida ay ahayd isbuucyo kooban ka hor.
Balse iilama muuqato dhammaadka kooxda khilaafada islaamka ee deegaankeyga. Hadda fikradaha iyo dagaalyahanada kooxdani deegaanka way ka buuxaan wayna adkaanaysaa in gebi ahaanba laga takhluuso.
Title: Sida ay IS cadaw uga samaysanayso Afghanistan
Posted by galmada Net, Published at 8:12 PM and have 0 comments